Maninona ireo endri-javatra vaovao ao amin'ny Twitter dia TSY lalao mpanova lalao
Ny antony mahatonga ny fikarohana sy ny fampahalalana hita ao amin'ny Twitter dia TSY lalao fanovana
Alahady, Jolay 8, 2012 Alakamisy, Jona 18, 2015 Andrew K Kirk
Manana ny Twitter nanambara andiana fiasa vaovao izay manatsara ny fikarohana sy ny fisongadinana. Afaka mikaroka ianao izao ary aseho anao ireo Tweet, lahatsoratra, kaonty, sary ary horonan-tsary mifandraika amin'izany. Ireto no fanovana:
Fanitsiana ny tsipelina: Raha diso tsipelina teny ianao dia hampiseho valiny ho azy ny Twitter noho ny fangatahanao kasaina.
Soso-kevitra mifandraika amin'izany: Raha mitady lohahevitra iray izay ampiasan'ny olona teny maro ianao, dia hanome sosokevitra mifanaraka amin'izany Twitter amin'ny teny mitovy amin'izany.
Vokatra miaraka amin'ny tena anarana sy anarana mpampiasa: Rehefa mitady anarana toa an'i 'Jeremy Lin' ianao dia hahita valiny milaza ny tena anarany sy ny solonanarana kaonty Twitter-nao.
Vokatry ny olona arahinao: Ankoatra ny fahitana ireo 'Tweet' na 'Top' amin'ny fikarohanao, dia azonao atao ihany koa izao ny mahita ireo Tweet momba ny lohahevitra nomena avy amin'ireo olona arahinao ihany.
Na dia nampivadi-po ny ezaka injeniera aza aho dia tsy nahita mialoha ireo fiasa vaovao an'ny Search & Discovery ao amin'ny Twitter amin'ny maha-mpanova lalao azy noho ny antony roa:
1. Fanavaozana ny Twitter amin'ny hafainganam-pandehan'ny saina
Isan'andro, misy kaonty Twitter vaovao 1 tapitrisa noforonina ary 175 tapitrisa ny Tweet nalefa! Ity stream of information tsy miova ity dia tsara, saingy tsy manome vola hikarohana sy hahitana. Tsy miloka bitsika fotsiny aho amin'ny lohahevitra sasany; fa kosa mitady olona mahaliana hanaraka ahy aho.
2. Twitter Dig Diged Ivelan'ny Twitter.com
Ny nahatonga ny fahombiazan'ny Twitter tamim-pahombiazana tamin'ny taona voalohany dia ny nahafahana namorona, nandevona ary nizara misaraka tanteraka tamin'ny Twitter.com ny vaovao. Ity haino aman-jery API mahery ity dia nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny taonina. Sahala amin'ny fiezahan'ny mpiambina Twitter hamerina ny olona ao amin'ny Twitter.com, mahazo aina ny olona mampiasa sy mahita bitsika amin'ny sehatra hafa. Noho izany antony izany dia tsy ho hitan'ny mpampiasa mavesatra maro ny fiasa amin'ny Search & Discovery ao amin'ny Twitter.
Fampandrenesana iray, ilay injeniera ao amin'ny Twitter izay mitarika ny fiampangana, Pankaj Gupta manan-talenta tokoa; nolaviny ny tolotra avy amin'ny Google sy Facebook hiasa ao amin'ny Twitter. Mazava ho azy fa hendry izy hanaporofoako fa diso aho.
Faly mandray ny tolotra avy anyamin'ny twitter (miala tsiny @Google ary @Facebook, Tiako ianareo, fa @amin'ny twitter dia ho aiza aho…)
Inona ny hevitrao? Hisy mpamadika lalao ho an'ny twitter ve ireo fiasa vaovao ireo? Avelao etsy ambany ny eritreritrao sy ny hevitrao.
Tags: Social Media MarketingTwitterfahitana twitterfikarohana ao amin'ny twitter
Andrew K Kirk no mpanorina ny Face The Buzz, izay manampy ny tompona orinasa kely hampiasa ny herin'ny marketing amin'ny Internet. Ny mpanjifany ankehitriny dia nanangona famatsiam-bola $ 3.5 tapitrisa. Manome isa voafetra ny fanombanana amin'ny marketing amin'ny Internet izy.
Ahoana ny fanovana ny takelaka amin'ny fahazarana miantsena
Jolay 8, 2012 amin'ny 3:32 PM
Mahafinaritra foana ny manoratra sy mizara aminareo rehetra. Misaotra ny ekipan'ny Marketing Tech Blog manontolo!
Jul 9, 2012 amin'ny 4: 45 AM
Ny Twitter mihitsy no mpanova lalao, samy mampiasa azy amin'ny fomba samihafa isika rehetra ary mbola miezaka mamolavola ny mety ho vita, toy ny Twitter mihitsy. Ny fanampiana rehetra amin'ny safidy fikarohana mampalahelo dia raisina. Mahafinaritra ny miresaka momba ny lohahevitra na dia izany aza dia mandray an'izany aho, Misaotra Paul
Jolay 9, 2012 amin'ny 2:10 PM
@twitter-205666332:disqus Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitrao! Mpanova lalao ny Twitter; tsy mampino ny dikan'ny fanavaozam-baovao 140 ho an'ny tontolo sosialy sy an-tserasera.
Heveriko fa hahita bebe kokoa hatrany ianao, ny Twitter manandrana mandroaka fampiasa bebe kokoa amin'ireo endri-javatra efa misy, mifanohitra amin'ny famolavolana endri-javatra maro kokoa.